QALABKA GURIGA LOOGA SAARO BARAFKA: WAA BARAFKA SI UU U DOORTO - MISHIINADA GAARKA AH
Iyadoo bilawga jiilaalka dhabta ah, si farxad leh carruurta, buuraha barafka ayaa ka muuqda jidadeena. Laakiin maaha dhammaan barafka jiilaalka ee farxadda. Gaar ahaan waxaa ka welwelsan arimaha qashin-saarista barafka iyo guryaha gaarka loo leeyahay. Qalabka noocan oo kale ah sida majaraha waa mid ku habboon, laakiin waxa aad u haboon in la isticmaalo hababka casriga ah. Laakiin kan barafka barafku u fiican yahay inuu doorto, waxaan isku dayi doonaa inaanu u sheegno maanta.
Noocyada barafka barafka adoo isticmaalaya habka xakamaynta
Barafka barafka, ama barafka ayaa ah qalab gaar ahoo loogu talagalay in laga saaro barafka meelaha qaarkood iyadoo la qabsado, xoqan oo tuuraya barafka jihada la cayimay. Waxaa intaa dheer, iyada oo ku xiran habka dhaqdhaqaaqa, baradarrada barafka ayaa ah kuwo iskood u kiciya oo iskood u kiciya.
Qaab dhismeedka iskood isu taga
Duufaan baraf ah oo iskood u madaxbannaan ayaa si madax-bannaan u wareegaya, taas oo si dhow u qiyaasaysa kala soociddeeda ayadoo loo marayo garbaha iyo gawaarida yaryar. Mashiinkaani waa inuu nadiifiyaa baraf kasta oo isku dhafan on a dhul ballaadhan, laakiin waa ka qaalisan inta kaarka ah non-self-propelling.
Qulqulo aan lahayn rabshado baraf ah
Mashiinno baraf ah oo aan dusha laga saarin waa inuu shaqeeyaa horay u socdaa, qabashada gacanta oo hagaha naftiisa. Haddii meesha nadiifinta ay tahay guri, iyadoon la garaacin, qashin-qubka iyo cadawga cad, ma adkaan doonto. Si kastaba ha noqotee, dhibaatooyinka kale ayaa dhici kara.
Awoodda tamarta ah ee barxadda barafka leh ee aan waligeed ahayn ayaa caadi ahaan ah 1.5-5 litir. c. Hawsha qalabkani waa in laga tirtiro barafka meesha aan loo baahnayn, oo u wareeji halka uu qofna ku dhibin. Dufcadaha barafka leh ee isdifaacay ayaa badanaa iska xaaraan barafka ilaa 5 m, ma aha wax ka badan.
Sida caadiga ah, moodooyinka aan mootada lahayn, caag ama caag ah ayaa loo bixiyaa oo aan waxyeello u gaynin dusha sare ee nadiifinta waxayna caawisaa in la dhaqaajiyo mashiinka (marka la taabto dusha sare, weelka caaggu ka soo jiido mishiinka).
Maadaama moodooyinka aan korontadu haysan isticmaali user, waxay leeyihiin tiro ah ilaa 35 kg, taas oo u oggolaanaya haweenka iyo dhalinyarada inay isticmaalaan.
Waa muhiim! Kala duwanaanta caajisku waxay ku haboon tahay aag yar, jidad iyo xitaa barafka barafka, laakiin xaalad ah in barafku uu si daran u dhacay, jilicsan, dabacsan, aan weli la jarin.
Mashiinka nooca uu ka fiican yahay
Dhamaan barafka guriga ayaa ka kooban kuwa soo socda saldhigyada aasaasiga ah:
wheels ama tracks;
xakamaynta guddi iyo gacan qabasho;
Engineku wuxuu bilaabmaa miisaanka shaqada ee barafka, iyo moodooyinka iskii ujooga - muraayadaha ama tareenada. Mishiinada waa koronto iyo gaas.
Qaar ka mid ah farsamoyaqaanku waxay sameeyaan qalab iyo qalabyo si ay uga shaqeeyaan qalabka gacmahooda. Haddii aad tahay mid ka mid ah, waxaad naftaada u samayn kartaa majarafad ama baraf baraf ah, laakiin xitaa gawaarida yaryar ama qalab loogu talagalay motoblock.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada korontada
Korontada Korontada - inta badan farsamooyinka aan la isku haleyn karin, oo hawlohoodu ku xidhan tahay shabakadda korantada. Muuqaal aad u kala duwan ee mashiinnada noocaas ah waa awood yar (qiyaastii 2-3 hp) iyo isafgarad weyn. Haddii aad ubaahan tahay mishiinka baahida caadiga ah, markaa korontada ayaa ah kan ugu wanaagsan ee barafka siiya. Wuxuu si fiican ula qabsan doonaa hawsha xuduudaha yar yar.
Makiinada korontada waxay leedahay lambar mudnaantakaas oo siinaya faa'iidooyinka noocaas ah ee ku saabsan makiinadda batroolka:
Hawlgab sahlan. Ku filan si aad u hesho shabakadda ku dhow.
Cabbirka iyo miisaanka. Sida caadiga ah, blower blower korontada culeyska 20 kg, iyo cabbiraadu waxay u oggolaanaysaa qalabka in lagu keydiyo haanta guryaha.
Dumarka Barafka korontada ee korontada korontada ku shaqeeya waxay u dhowdahay aamusnaan, markaa ma toosi doontid jaarkaaga haddii aad go'aansato inaad barafka ka saarto subixii hore.
Qiimaha. Gaadhi noocan oo kale ah waa ka raqiisan yihiin kuwa shidaalka qaada, sidaas darteed, dadka haysta waxyaabo kooban ayaa laga iibsan karaa qalabkan.
Ma taqaanaa? K. Blake oo ka soo jeeda Canada ayaa caan ku noqotay, maxaa yeelay wuxuu awoodey inuu isku soo dubarido barafka qaybo ka mid ah baaskiiladii hore.
Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka gaasta gaaska
Faa'iidada barafka barafka waa awood tamarta. Warshaduhu waxay bixiyaan laba-daroogo iyo afar darjiimood oo leh awood 5.5 litir. c. Sida caadiga ah, mishiinnadani waxay leeyihiin biraha birta waxayna ku qalabeeysan yihiin muraayad la jajabiyey ama qaabaysan, habka firfircoon, taasoo ka dhigaysa suurtogalnimada in baraf lagu tuuro fogaan ilaa 8 m, iyo baaldi baraf ah.
Qiimaha shidaalka ee miisaankoodu yahay 60 kg, kaas oo aan faragalinta nadiifinta barafka - shaqaaluhu wuxuu kaliya ku hagaajinayaa baabuurka.
Dhibaatada daran ee barafka qulqulka barafka ayaa ah burburka soo noqnoqda qaar ka mid ah qaybaha (dildillaacyada, giraangirrada, qaybaha mashiinka, suumanka). Inkasta oo ay taasi gaabis tahay, barafka-shidaalka ee batroolka ka fiican koronto, sababtoo ah:
Waxaad ku nadiifin kartaa barafka qalabkan oo kale meelaha fog-fog (ma jiraan wax xiriir la leh ilaha korontada);
Waxaad ka saari kartaa barafka cirridka ah iyo barafka - awoodda tan ayaa ku filan.
Gaariga ama wheels: taas oo u fiican caloosha
Gawaarida barafka iskood u leh ayaa lagu soo saaraa darawal ama gawaarida la socda. Isla mar ahaantaana la raaco gaadiidka awood badan iyo waqti isku mid ah oo qaali ah (tani waa tiradooda kaliya). Faa'iidooyinka barafka la daboolay ayaa sidoo kale loo aaneyn karaa awooddooda inay ku shaqeeyaan goobaha yaryar oo ay la qabsadaan shaqo culus.
Ma taqaanaa? La soco baraf baraf ah ayaa lagu beddeli karaa wheeled, haddii Waxaa intaa dheer ku dheji taayirada silsiladaha barafka.
Doorashada jidka ama wheels waxaa saameeya dhowr arrimood. First of all, awood u leh inuu xiro wheelka si weyn u kordhiyaa maneuverability, iyo operator si fudud u rakibin qalabka.
Gawaarida waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka shaqeyso xayeysiiska, curbada iyo si fudud si looga kabo caqabadaha yar yar inta lagu jiro gaadiidka. Intaa waxaa dheer, barafka barafka lagu ogaado ayaa kuu oggolaanaya inaad hagaajisid qalab dheelitirka.
Si aad u ilaaliso nidaamka dayrka xagaaga waxaad ka caawin doontaa gaaska qafaariyaha ama cawska.
Doorashooyinka sare marka aad dooranayso kaaliyaha jiilaalka
Ma dooran kartid baraf barafeeyaha kaliya nooca mashiinka. Ka hor intaadan dooran baraf barafeed ee gurigaaga, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso dhowr sifooyin oo muhiim ah.
Xajinta boodada iyo alaabta dhererka
Xuddunku waa caag iyo bir ah. Dhibaato moodooyinka ay ku jiraan muraayada birta - waxay miisaan badan yihiin oo inta badan ku riixaan markay shaqaynayaan. Isla mar ahaantaana, haddii ay dhacdo baraf daran, sida qulqulatadu aanay jabin ama jebin haddii barafka gudaha uu qaboojiyo.
Qodobbada qashinka balaastigga ah waa kuwo fudud oo ka raqiisan, ma aha inay ku dhacaan inta lagu jiro hawlgalka, laakiin khatarta ah ee macaawintu waa weyn tahay. Laakiin haddii barafka gudaha uu barafaysan yahay, markaa ka dib waxaa laga saarayaa qalabka xawaaraha sare (80 km / h).
Waa muhiim! Ka hor inta aanad ku dhajin karin baraf baraf leh caag balaastik ah, hubi xaaladda qalabka.
Habka xayawaanka barafka
Waxtarka iyo wakhtiga barafka wuxuu ku xiran yahay xajmiga habka isbedelka. Xaddiga barafka ayaa ku xiran baaxadda baaldi.
Baaxadda xajinta ayaa ah masaafada ah in mashiinku uu ka nadiifin karo hal mar. Tirada weyn ee loo yaqaan 'parameter', ayaa loo baahan yahay in la yareeyo baasaska.
Heerka barafku waa heerkulka barafka ee mashiinka uu qaban karo. Kororka barafka ee korontada qalabeysan baaldiyaal waaweyn oo leh 30-55 cm iyo dherer ah 12-30 cm Mashiinno baraf ah, baaldiyada way ka weyn yihiin: dhererka - 25-76 cm, width - 55-115 cm.
Dhinacyada kala duwan ee qaabka wax loo qabsado waa taarbo gaar ah oo dib u dajinta sare ee barafka (hoos udhaca barafka).
Noocyada muuqaalku waxay noqon karaan kuwo siman ama ilko leh. Si looga hortago mashiinka inuu waxyeelo u geysto aagga, naqshadaha waxaa lagu dhejiyaa dharka qashinka oo gaar ah.
Ma taqaanaa? Noocyada kala-soocidda barafka waxay ku xiran tahay oo kaliya astaamaha unugga, laakiin sidoo kale dhinaca jihada dabaysha. Sidaa daraadeed, mararka qaarkood waxaa jira farqi u dhexeeya qiimaha lagu qeexay dokumentiyada.
Inkasta oo awooda aysan ahayn sifooyinka ugu muhiimsan, waa in la tixgeliyaa ka hor inta aan la dooran mashiinka mashiinka qulqulka badan ee barafka loogu talagalay guriga. Soo-saarayaasha ayaa ku talin Awoodda xigta iyadoo ku xiran aagga:
500-600 mitir labajibbaaran. m 600-1500 mitir labajibbaaran. m 1500-3500 sq. m 3500-5000 sq. m
Awooda, l. c. 5-6,5 8 10-10,5 13
Muuqaalka korantada, m 5-6 7-9 10-12 10-15
Waa muhiim! Kala soociddu ma aha midka ugu dambeeya, maaddaama leh yaraanta yar yar ee loo yaqaan 'radius yar' waa lagama maarmaan in la sameeyo baasabado badan oo loo marayo qaybta, sidaas awgeed, waqti badan ayay ku qaadataa.
Tilmaamo dheeraad ah (boodhadhka bilowga ah, kuleylka kulul, nalalka, leexashada, iwm.)
Hawlaha barafka waxaa lagu kaxeyn karaa bilowga ama korontada. Marka la eego nalka buug-gacmeedka, waxaad u baahan tahay inaad xakameyso xakabadda, bilowga korantadu waxay u baahan tahay bilawga. Korontada bilawga ah inkastoo loo tixgelinayo in ay ku habboon tahay, laakiin buuggan waa mid la isku halleyn karo
Noocyada badan ee barafka barafka waxaa lagu qalabeeyaa hawlgal gacan qabasho leh, taas oo suurtogal u ah in ay qabato shaqo kasta oo dhaxan.
Waxaa sidoo kale jira noocyo qaali ah oo leh nalalkataas oo kuu ogolaaneysa inaad barafka ku nadiifiso mugdiga. Intaa waxaa dheer, moodooyinka qaar ee barafka barafka waxaa lagu daray qalab is dhalaalaya oo kulul.
Sidoo kale waa muhiim in roodhadii barafku dib u soo noqdaan. Ka dib oo dhan, barafka lagu riixo ee baraf deyn ah ma fududa inaad gacanta ku soo baxdo.
In aad haysatid dildilaaca duufaanada barafka ayaa kuu ogolaanaya inaad baraf ku qorto dhinaca loo baahan yahay xagasha quman. Qaar ka mid ah moodooyinka ayaa kuu oggolaanaya inaad xakameyso jardiinka leh jasiiradaha, taas oo yareyneysa waqtiga nadiifinta. Haddii wax laga beddelo manhajka, mashiinka waa in la damiyaa, dib loo wareejiyaa, kadibna sii wadaa inuu shaqeeyo.
Haddii aad go'aansatay inaad iibsato blower blower, si taxaddar leh u akhri dabeecadaha qaabka iyo isticmaal talo-bixinta takhasus leh. Kaliya kadib falanqeyn faahfaahsan ayaa sameyn kara iibsi. Ka dib, waxaad u baahan tahay mashiinka tayada oo waqti dheer iyo wax ku ool u shaqeynaya, iyo nadiifinta barafka ma noqonayso shaqo caadi ah, laakiin xiiso wanaagsan.